China Plastic electroplating uye vacuum yakanamirwa pamifananidzo Manufacturer uye nokutengesa | Mestech
Electroplating uye vacuum yakanamirwa pamoto pane maviri akajairika maitiro ekuwedzera esimbi kupfeka kune epurasitiki zvikamu. Maitiro aya anogona kuwedzera kupfeka kuramba uye ngura kuramba kwezvikamu zviri pamusoro, kuwedzera esimbi mameseji uye kushongedza kwechitarisiko.
Inofananidzwa nekupenda pendi, epurasitiki electroplating uye yekugezesa yakakwenenzverwa ine nani kupfeka kuramba, ngura kuramba uye yakasarudzika esimbi kubwinya. Inowanzo shandiswa mune mamwe ekumusoro-magumo zvigadzirwa zvikamu, senge multimedia chigadzirwa housings, smartwatch kesi makesi, mabhatani, marambi ekuisira, mwenje wemarambi uye zvishongedzo.
Nheyo dzemvura electroplating uye yekutsvaira kwakasiyana, uye zvinoshanda zvinhu uye mhedzisiro zvakasiyana. Ngatitaurire pazasi:
Plastiki electroplating maitiro ekunyudza epurasitiki zvikamu mu electrolyte uye kuisa simbi zvikamu pamusoro pebasa-chidimbu nekukanda izvozvi kana zvemakemikari maitiro. Mushure meelectroplating, iyo yepamusoro ruvara isirivheri, sub sirivheri uye sirivheri grey.
Mapurasitiki eABS akafananidzirwa nesirivheri nitrate chemakemikari maitiro, colloidal palladium PD kemikari nickel yakanangana nekurongedza kuti ibudise yakaturikidzana ine adhesion yakanaka pamusoro payo, uyezve dzimwe simbi dzakasarudzwa.
Electroplating inoitwa mu electrolytic mvura solution, saka inonzi "water electroplating", "hydropower plating". Zvimwe zvakajairika ndeyendarira yakanamirwa pamusoro pepurasitiki, nickel chromium, trivalent chromium, pfuti ruvara, pearl nickel zvichingodaro.
Mukufungidzira, mapurasitiki ese anogona kusarudzwa nemagetsi, asi parizvino ABS chete, ABS + PC ndiyo yakabudirira kwazvo, asi kunamatira kweyekuputirwa nemagetsi kune mamwe mapurasitiki hakuna kugutsikana. Maitiro emvura electroplating ari nyore uye haadi kumwaya primer pamberi uye mushure mekuisa. Iko kupfeka kune zvakanaka kunamatira, kwakakora kupfeka uye kwakaderera mutengo.
2.Purasitiki inovharika yakanamirwa pamifananidzo (Panyama Vapor Deposition-PVD)
Kuchenesa kuputira kunonyanya kusanganisira kuputika kwemhepo, kuputira uye ion ra. Ivo vese vanoisa akasiyana esimbi uye asiri esimbi mafirimu pamusoro pepurasitiki
zvikamu ne distillation kana kuputira pasi pevhavha. Nenzira iyi, yakatetepa pamusoro pekupfeka inogona kuwanikwa.
Kuchenesa kuputira kunonyanya kusanganisira kuputira kwemhepo kuputira, kuputira nekupenya uye ion ra. Iwo ese anoshandiswa kuisa simbi dzakasiyana siyana pamusoro peplastiki zvikamu ne distillation kana kuputira pasi pemamiriro ekutsiva.
Yisiri-yesimbi firimu, kuburikidza neiyi nzira inogona kuve yakatetepa pamusoro pekupfeka, uye iine zvakanakira zvakanakisa zvekumhanya nekukurumidza uye kunamatira kwakanaka, asi mutengo wacho zvakare wakakwirira, unowanzo shandiswa kuenzanisa, unhani hwekushongedza hwepamusoro-kumagumo kupfeka kunogona zvigadzirwa.
Vacuum inoshandiswa mumapurasitiki akadai seABS, PE, PP, PVC, PA, PC, PMMA, nezvimwewo. Zvipfeko zvakatetepa zvinogona kuwanikwa nekupukuta pombi.
Vacuum bemhapemha zvinhu zvinogona kufukidzwa nemhando dzakasiyana-siyana dzesimbi, senge aruminiyamu, sirivheri, mhangura negoridhe, zvine nzvimbo yakadzika yekunyungudika kupfuura tungsten waya.
YeMotokari ABS chikamu Electroplating
Zvikamu zvepurasitiki zvine nickle electroplating
Yakakwira gloss chrome yakasarudzika epurasitiki zvikamu
Yakakwira gloss goridhe ruvara electroplated epurasitiki zvikamu
3.Pulasitiki inovharika yakanamirwa pamifananidzo (Panyama Vapor Deposition-PVD)
Lampshade inovhara yakanamirwa pamifananidzo yepurasitiki
UV vacuum yakanamirwa pamapurasitiki zvikamu
Vacuum yakanamirwa pamifananidzo epurasitiki inoratidza mukombe
Nano ruvara rwekutsvaira yakakwenya mapurasitiki zvikamu
Ndeupi musiyano uripo pakati pepurasitiki electroplating uye epurasitiki vacuidhi yakanamirwa pamifananidzo?
(1) Vacuum yakanamirwa pamadziro inzira yekupfeka mukupfapfaidza mutsetse uye vhuvhu remoto, nepo electroplating iri chiitiko mune aqueous mhinduro. Nekuti iri kupuruzira pendi, yekugezesa yakakwenenzverwa haina kukodzera kune yakaoma chimiro zvigadzirwa, nepo mvura electroplating isingarambidzwe nechimiro.
(2) Kugadzira tekinoroji, senge yekumhanyisa kuputira kwepurasitiki glue, inogona kupfupikiswa nyore: basic surface degreasing, dedusting, electrostatic precipitation, spraying UV primer, UV kurapa, kuputira mweya, kudhiraivha, kutsikisa pasi pasi (colour concentrate inogona kuwedzerwa) , kurapa, zvigadzirwa zvakapera; Vacuum unhani inogumira nemaitiro, uye haina kukodzera kugadzirisa zvigadzirwa nenzvimbo yakakura kwazvo nekuda kwebasa. Maitiro ehunyanzvi haana kudzorwa zvakanaka, uye mwero wekuremara wakakwira.
Plastic electroplating (kazhinji ABS, PC / ABS): makemikari anodonhedza hydrophilic coarsening kudzikisira preimpregnation palladium activation kumhanyisa electroless nickel yakanamirwa pamhepo hydrochloric acid activation coke mhangura sulfuric acid activation semi-inopenya nickel nickel yekuvhara chromium kuomesa zvigadzirwa zvakapera;
(3) Kuisa magetsi kunogona kupedzwa mukugadzirwa kwakazara zvoga.
(4) sekusvika pakuonekwa, iko kupenya kwemavara aluminized firimu inopenya kupfuura iyo yeelectroplating chromium.
(5) Kusvika pakuita basa, kuputira kwepombi yepurasitiki ndiyo yekumusoro pendi, nepo mvura yekugezesa kazhinji iri simbi chromium, saka kuomarara kwesimbi kwakakwirira kupfuura kwesimbi.
s yekumira ngura, kupenda pendi kunowanzo shandiswa. Chifukidzo chevhavha chiri nani pane simbi simbi, asi pane musiyano mudiki pakati pavo mune yepamusoro-magumo zvigadzirwa zvinodiwa; mumamiriro ekunze, electroplating iri nani pane kuputira mweya, saka kazhinji inoda kushandiswa kwenguva refu kwekunze nekushomeka kwemamiriro ekunze.
Mune indasitiri yemotokari, pane zvekare zvinodiwa kuti usapisa tembiricha yakadzika yepasi, mwando uye kupisa, solvent kupukuta uye zvichingodaro.
(6) Yepombi yekutsiva inonyanya kushandiswa muindasitiri yekutaurirana yemagetsi, senge nharembozha nhare, zvishandiso zvemotokari, senge makapu anoratidza marambi emota. mvura yakanamirwa pamvura inonyanya kushandiswa pakushongedza chromium, senge mota yemusuwo trim. Maburi emusuwo zvichingodaro.
(7) Panyaya yechigadzirwa chitarisiko ruvara rwakasiyana, yekuzadza yakakwenenzverwa yakapfuma kupfuura electroplating. Kuvhara mhete kunogona kuitwa mugoridhe uye nehumwe huvara hwemavara.
(8) sekureva kwekugadzirisa mutengo, ikozvino kwekutsvaira kwakadhura mutengo kwakakwirira kupfuura kweye mvura yakanamirwa pamoto.
(9) Yepombi yekupukuta yakasvibirira nzira yekudzivirira nharaunda nekukurumidza tekinoroji kusimudzira, nepo mvura electroplating iri tsika yechinyakare ine kwakanyanya kusvibiswa, uye iyo indasitiri inogumirwa nekukanganiswa nemitemo yenyika.
(10) Heino nzira yekumwaya (sirivheri girazi maitiro) iyo ichangobuda. Maitiro acho ipurasitiki degreasing uye deelectrostatic yakakosha primer kubheka nano-kupuruzira yakachena mvura yekubheka.
Iyi tekinoroji inogona zvakare kuita girazi kushanda pane epurasitiki pamusoro. Ichowo chiitiko chakatipoteredza. Iwo ekutanga uye ekupedzisira maitiro akafanana neakavhara vhu, asi chete yepakati yakanamirwa pamadziro.
Aluminium inotsiviwa negirazi-rakasaswa girazi, asi ikozvino kwehunyanzvi kuita kweichi chiitiko hakugone kufananidzwa nemvura yakanamirwa pamhepo uye yekutsvaira. Inogona chete kuiswa kune zvakagadzirwa nemaoko zvigadzirwa izvo zvisingade kukwirira kutaridzika uye kuita.
Vacuum yakanamirwa pamifananidzo michina yezvikamu zvepurasitiki
Plastiki electroplating yekugadzira mutsara
Kana ako ane zvigadzirwa zvine electroplated epurasitiki zvikamu kana bhatiro yakafukidzwa epurasitiki zvikamu ndapota taura nesu.
Pashure: Plastiki musoro goko re robot
Zvadaro: Motokari epurasitiki zvikamu
Structural hunhu jekiseni muforoma fo ...
Yakasimba epurasitiki yekuchengetedza bhokisi jekiseni kuumbwa
Zvikamu zvepurasitiki zvemvura yekuchenesa
Doorbell epurasitiki zvikamu zvejekiseni kuumbwa